फेसबुक ह्याक गरी पैसा माग्ने गिरोह सक्रिय, बैंकका उच्च अधिकारीहरु निशानामा
काठमाडौं ।पछिल्लो समय बैंकिङ अपराधका घटनाको शैली फेरिन थालेको छ । सजिलै पैसा कमाउन बैंकिङ अपराधका विभिन्न तौर तरिकाहरु अपनाउँदै ह्याकरहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई उनीहरुकै फेसबुकमा भएका साथीहरुको फेसबुक एकाउण्टबाट म्यासेज पठाएर पैसा माग्ने गरेका छन् । ह्याकरले फेसबुकमा साथी रहेका मध्ये सबैभन्दा बढी कुराकानी र फोन सम्पर्क हुने व्यक्तिलाई म्यासेस पठाएर पैसा माग्ने गरेका प्रशस्तै घटनाहरु बाहिरिन थालेका छन् ।ह्याकरले सुरुमा साधारण औपचारिकता निभाउँदै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पैसा माग्ने गरेका छन् । ह्याकरले पछिल्लो समय साधारण व्यक्ति भन्दा बढी बैंकर्सलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई म्यासेज पठाएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पैसा माग्ने गरेका छन् । बैंकर्ससँग पैसा हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण पनि ह्याकरले बैंकर्सलाई निशाना बनाएको हुन सक्छ ।शुक्रबार युनाइटेड फाइनान्सका डेपुटी सिइओ ईश्वर पोखरेलको फेसबुक ह्याक गरी ह्याकरले ५० हजार रुपैँयाँ माग गरेको छ । त्यस्तै एक साता अघि सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङको फेसबुक पनि ह्याक गरी ७० हजार रुपैँयाँ माग गरेको थियो । सिइओ गुरुङसँग भोलि फिर्ता गर्ने भन्दै ह्याकरले पैसा मागेको थियो । उनले प्रहरीमा उजुरी गरिसकेका छन् ।यसो भन्छ बैंकर्स संघह्याकरले मोबाइल बैंकिङ, ई सेवा लगायत प्रयोग गरेर पैसा पठाउन आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमा केही व्यक्तिहरुले कुराकानी सुनेको भए पनि छलफल भने नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ह्याकरहरुले प्रयास गरिरहने भएकाले आफैं सचेत रहनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष दाहालले बताए । ह्याकरले मोबाइल बैंकिङको पनि प्रयोग गरेको देखिएकाले बैंकका कर्मचारीदेखि सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई समेत सचेत गराउनु पर्ने उनले बताए । फेसबुक ह्याक गरेर त्यस्तो म्यासेज कसैले पठाएर विना जानकारी फोन नगरी पैसा दिनेलाई बैंकले रोक्न नसक्ने भएकाले आफै सतर्क रहनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । यघि यस्ता घटना बढेकै हुन् भने राष्ट्र बैंक र बैंकर्सले आम ग्राहकवर्गमा जानकारी गराउने उनले बताए ।के भन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक ?साइबर अपराधको घटना भएकाले यस्तो खालको घट्ना हेर्न त्यति सहज नभएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ह्याकरले मोबाइल बैंकिङ तथा इ सेवा लगायत प्रयोग गरिरहेका छन् । मोबाइल बैंकिङ बन्द गर्दा सम्पूर्ण ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंक त्यसो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको तत्काल भूमिका नहुने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।तर के राष्ट्र बैंक यस विषयमा जानकारी हुनु पर्दैन ? जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? राष्ट्र बैंकले विशेष टाक्सफोर्स बनाएर पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छ । विगतका दिनहरुमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कयौँ साइबर अपराधका घटनाहरु भएका छन् । जसमा अर्बाैँ रुपैँयाँ हिनामिना भएको छ । तर राष्ट्र बैंक भने यसमा आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नहुने भन्दै उम्किएको छ । प्रहरी साइबर ब्युरो तथा अपराध अनुसन्धान व्युरो यसो भन्छन्केन्द्रीय प्रहरी साइबर ब्युरो भोटाइटीले फेसबुक ह्याक गरी ठगी भएका उजुरीहरु परेको जनाएको छ । व्युरोका प्रवक्ता नबिन्द्र अर्यालले त्यस्ता उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए । यस्ता घटनामा साइबर अपराध र ठगी सम्बन्धी अपराध जोडिएकाले फेसबुक ह्याक गरी भएका ठगीका घटना अपराध माहाशाखा टेकुमा पठाएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।फेसबुक ह्याक गरी पैसा माग्दै ठगी गर्ने अपराधहरु निकै बढ्ने गरेको महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बताए । प्रवक्ता बोगटीले दैनिक ३/४ वटाका दरले यस्ता घटनाहरुको उजुरी आउने गरेको बताए । हाल यस्ता उजुरीको संख्या १५० नाघिसकेको छ । महाशाखाले अर्काको फेसबुक ह्याक गरी आफन्तहरूसँग आफू समस्यामा परेको भन्दै ठगी गर्ने २३ वर्षीय सविर आलमलाई दुहबीबाट आइतबार पक्राउ गरेको थियो । अरूको फेसबुक ह्याक गर्ने अनि ती आइडीबाट आफन्तहरूलाई आफू समस्यामा परेको भन्दै खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाइ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ठगी गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । नीजले ७५ लाख ठगी भएको भन्ने उजुरी परेपछि प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा फेला परेको हो । उनलाई ठगी सम्बन्धी मुद्धा चलाइएको छ । महाशाखाका अनुसार यस्ता घटनाबाट ठूलो रकम ठगी भएको छ । यस्ता अपराधबाट कसरी बच्ने ?सबैभन्दा पहिले फेसबुकमा पैसा माग्नेहरुलाई फोन सम्पर्क गरेर बुझेर मात्रै पैसा दिने काम गर्नुपर्छ । आफन्तले भनेको भनेर निश्चित नगरी पैसा नदिन बैंक, राष्ट्र बैंक तथा प्रहरीले सुझाव दिएका छन् ।
१७ श्रावण २०७७, शनिबार १७:३८
पछिल्लो समय बैंकिङ अपराधका घटनाको शैली फेरिन थालेको छ । सजिलै पैसा कमाउन बैंकिङ अपराधका विभिन्न तौर तरिकाहरु अपनाउँदै ह्याकरहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई उनीहरुकै फेसबुकमा भएका साथीहरुको फेसबुक एकाउण्टबाट म्यासेज पठाएर पैसा माग्ने गरेका छन् । ह्याकरले फेसबुकमा साथी रहेका मध्ये सबैभन्दा बढी कुराकानी र फोन सम्पर्क हुने व्यक्तिलाई म्यासेस पठाएर पैसा माग्ने गरेका प्रशस्तै घटनाहरु बाहिरिन थालेका छन् ।
ह्याकरले सुरुमा साधारण औपचारिकता निभाउँदै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पैसा माग्ने गरेका छन् । ह्याकरले पछिल्लो समय साधारण व्यक्ति भन्दा बढी बैंकर्सलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई म्यासेज पठाएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पैसा माग्ने गरेका छन् । बैंकर्ससँग पैसा हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण पनि ह्याकरले बैंकर्सलाई निशाना बनाएको हुन सक्छ ।
शुक्रबार युनाइटेड फाइनान्सका डेपुटी सिइओ ईश्वर पोखरेलको फेसबुक ह्याक गरी ह्याकरले ५० हजार रुपैँयाँ माग गरेको छ । त्यस्तै एक साता अघि सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङको फेसबुक पनि ह्याक गरी ७० हजार रुपैँयाँ माग गरेको थियो । सिइओ गुरुङसँग भोलि फिर्ता गर्ने भन्दै ह्याकरले पैसा मागेको थियो । उनले प्रहरीमा उजुरी गरिसकेका छन् ।
ह्याकरले मोबाइल बैंकिङ, ई सेवा लगायत प्रयोग गरेर पैसा पठाउन आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमा केही व्यक्तिहरुले कुराकानी सुनेको भए पनि छलफल भने नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ह्याकरहरुले प्रयास गरिरहने भएकाले आफैं सचेत रहनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष दाहालले बताए । ह्याकरले मोबाइल बैंकिङको पनि प्रयोग गरेको देखिएकाले बैंकका कर्मचारीदेखि सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई समेत सचेत गराउनु पर्ने उनले बताए । फेसबुक ह्याक गरेर त्यस्तो म्यासेज कसैले पठाएर विना जानकारी फोन नगरी पैसा दिनेलाई बैंकले रोक्न नसक्ने भएकाले आफै सतर्क रहनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । यघि यस्ता घटना बढेकै हुन् भने राष्ट्र बैंक र बैंकर्सले आम ग्राहकवर्गमा जानकारी गराउने उनले बताए ।
साइबर अपराधको घटना भएकाले यस्तो खालको घट्ना हेर्न त्यति सहज नभएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ह्याकरले मोबाइल बैंकिङ तथा इ सेवा लगायत प्रयोग गरिरहेका छन् । मोबाइल बैंकिङ बन्द गर्दा सम्पूर्ण ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंक त्यसो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको तत्काल भूमिका नहुने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।
तर के राष्ट्र बैंक यस विषयमा जानकारी हुनु पर्दैन ? जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? राष्ट्र बैंकले विशेष टाक्सफोर्स बनाएर पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छ । विगतका दिनहरुमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कयौँ साइबर अपराधका घटनाहरु भएका छन् । जसमा अर्बाैँ रुपैँयाँ हिनामिना भएको छ । तर राष्ट्र बैंक भने यसमा आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नहुने भन्दै उम्किएको छ ।
प्रहरी साइबर ब्युरो तथा अपराध अनुसन्धान व्युरो यसो भन्छन्
केन्द्रीय प्रहरी साइबर ब्युरो भोटाइटीले फेसबुक ह्याक गरी ठगी भएका उजुरीहरु परेको जनाएको छ । व्युरोका प्रवक्ता नबिन्द्र अर्यालले त्यस्ता उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए । यस्ता घटनामा साइबर अपराध र ठगी सम्बन्धी अपराध जोडिएकाले फेसबुक ह्याक गरी भएका ठगीका घटना अपराध माहाशाखा टेकुमा पठाएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
फेसबुक ह्याक गरी पैसा माग्दै ठगी गर्ने अपराधहरु निकै बढ्ने गरेको महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बताए । प्रवक्ता बोगटीले दैनिक ३/४ वटाका दरले यस्ता घटनाहरुको उजुरी आउने गरेको बताए । हाल यस्ता उजुरीको संख्या १५० नाघिसकेको छ । महाशाखाले अर्काको फेसबुक ह्याक गरी आफन्तहरूसँग आफू समस्यामा परेको भन्दै ठगी गर्ने २३ वर्षीय सविर आलमलाई दुहबीबाट आइतबार पक्राउ गरेको थियो । अरूको फेसबुक ह्याक गर्ने अनि ती आइडीबाट आफन्तहरूलाई आफू समस्यामा परेको भन्दै खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाइ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ठगी गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । नीजले ७५ लाख ठगी भएको भन्ने उजुरी परेपछि प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा फेला परेको हो । उनलाई ठगी सम्बन्धी मुद्धा चलाइएको छ । महाशाखाका अनुसार यस्ता घटनाबाट ठूलो रकम ठगी भएको छ ।
यस्ता अपराधबाट कसरी बच्ने ?
सबैभन्दा पहिले फेसबुकमा पैसा माग्नेहरुलाई फोन सम्पर्क गरेर बुझेर मात्रै पैसा दिने काम गर्नुपर्छ । आफन्तले भनेको भनेर निश्चित नगरी पैसा नदिन बैंक, राष्ट्र बैंक तथा प्रहरीले सुझाव दिएका छन् ।
फेसबुक ह्याक, बैंकिङ अपराध
Prevनेपालमा कोरोना संक्रमित, कुन प्रदेशमा कति ?
अनसनरत युवाका माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग देउवाको आग्रहNext